प्रेम गीत ३ को पहिलो गीत ‘हात्ती ढुंगामा’ सार्वजनिक ! - Experience Best News from Nepal
प्रेम गीत ३ को पहिलो गीत ‘हात्ती ढुंगामा’ सार्वजनिक !
निर्माण अगावैदेखि दर्शकमाझ प्रतिक्षीत रहेको चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ को “हात्ती ढुंगामा” गित सार्बजनिक भएको छ । आउँदो चैत २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको उक्त सार्बजनिक गीतमा सगर आले र मेलिना राई को स्वर रहेको छ भने सब्द हर्क सौद तथा संगीत कल्याण सिङ्ग को रहेको छ ।
कविराज गहतराजले कोरियोग्राफ गरेको सो गीतको भिडियोलाई बनिश शाह र भुपेन्द्र अधिकारी ले सम्पादन गरेका छन् । भिडियोमा प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, सुनिल थापा, लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको देख्न सकिन्छ ।
फिल्ममा शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माओत्से गुरुङ, मनीष राउत, प्रेम पुरी, लक्ष्मी बर्देवा, अनुभव रेग्मी, योगिशा खत्री, पुस्कर कार्की, जिबन भट्टराई, सम्वृद्धि शाही ठकुरीलगायतले पनि अभिनय गरेका छन् ।
चलचित्रमा कल्याण सिंह र एलिश कार्कीको संगीतमा प्रताप दास, मेलिना राई, सागर आले र प्रविशा अधिकारीले स्वर भरेका छन् । चक्रबहादुर चन्द र डम्बरबिक्रम सेन कार्यकारी निर्मातामा छन् भने कुमार शान शाह र ओएसआर डिजिटल सह-निर्माताको रुपमा रहेको छ ।
Kristina GurungPradeep Khadka
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को ट्रेलरमा पल र पूजाको प्रेम